आयो सुन्तला खाने सिजन,स्वास्थ्यमा पुग्छ फाइदै–फाइदा
सुन्तला नाम लिने वित्तिकै तपाईको मुख रसाउछ होला । अहिले सुन्ताला खाने सिजन पनि हो । गाउँघरमा सुन्तला पाक्न शुरु भएको होला । तिहारका लागि भारतबाट पनि सुन्तला आयात शुरु भइसकेको छ । फलफुल बजारमा नेपाल र भारतीय सुन्तला आइसकेको छ । सुन्तला लिएर घाम ताप्दै साथीहरुसँग गफगाफ गर्दै खान निकै रमाइलो हुन्छ । सुन्तला खादा रमाइलो मात्र हुँदैन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक रहेको पोषणविद्हरु बताउँछन् । सुन्तलाको फाइदा यस्तो छ – सुन्तलामा पाइने हेस्परिडिनले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ, – सुन्तलामा प्रसस्त भिटामिन सी हुने भएकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ,…
खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुस् यी ५ खानेकुरा , स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ
काठमाडौँ । अधिकांश मानिसहरु विहान उठ्ने बितिकै विभिन्न किसिमका खानेकुराहरु खाने बानी हुन्छ । त्यसमा पनि धेरैले विहानै खाली पेटमा चियाँ ,कफी र चिसो खाने गर्दछन् । तर यो बानी खराब बानी हो । यसले शरिरमा ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुस् यी ५ खानेकुरा । -खाली पेटमा भुलेर पनि धेरै पिरो र मसलेदार खाना खानु हुदैँन् । -खाली पेटमा चिसो पेय पदार्थ पिउनु हुँदैन् । बरु त्यसको ठाँउमा मनतातो पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । -यदि खाली पेटमा अमिलो खानेकुरा खायो भने भने पेटमा गम्भिर…
जन्मेको छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि आज र भोलि भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै
राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा देशका सबै पालिकामा यही कात्तिक २ र ३ गते सो कार्यक्रम सञ्चलन हुँदैछ । कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मेको छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका करीब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल, एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका २४ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि (अल्वान्डाजोल), छ महीनादेखि दुई वर्षभित्रका चार लाख बालबालिकालाई बालभिटा र पाँच वर्षमुनिका २७ लाख बालबालिकाको पाखुराको नाप लिइने छ । बालबालिकाको पोषणको स्थिति पत्ता लगाउन पाखुराको नाप लिइने गरिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग,…
तपाईंको घुर्ने बानी छ भने वेवास्ता नगर्नुस्, हुन सक्छ हृदयघात
नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. निर्मला तामाङका अनुसार धेरैको निद्रामा घुर्ने बानी हुन्छ, वरपरकालाई घुर्ने बानीले समस्या भए पनि आफूले घुरेको छु भन्ने आफैँलाई थाहा हुन्न । उनले निद्रामा घुर्ने बानी मोटोपना भएका र ज्येष्ठ नागरिकमा धेरै हुने जानकारी दिइन् । घुर्ने बानी पनि एक प्रकारको रोग हो भनेर थाहा नभएको हुनसक्छ तर यो घातक रोग भएको प्रस्ट पार्दै डा. तामाङले भने, “घुर्ने बानीका कारण मुटु, उच्च रक्तचाप र चिनी रोगलाई नराम्रो असर पार्छ, त्यसकारण यसलाई समयमा नै उपचार गर्नुपर्छ ।” डा. तामाङले घुर्ने बानी भएको मानिस राति सुत्न सकेको…
यसरी सजिलै छोड्न सकिन्छ रक्सी
तपाई जाँड, रक्सी, वियर, वाइन आदि सेवन गर्नुहुन्छ ? मदिरा सेवन गर्ने बानीका कारण तपाई आफै चिन्तित हुनुहुन्छ । मदिराको कुलतमा लागेर तपाई यसबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? यदी चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई मदिराको कुलतबाट कसरी टाढा रहने भन्नेबारे जानकारी दिँदै छौं । तपाईलाई थाह छ वा छैन मदिरा सेवन गर्दा स्वस्थ्यमा विभिन्न किसिमको रोगहरु निम्तिन्छ । मदिरा सेवन गर्दा दुर्घटनामा पर्ने, चोटपटक लाग्ने समस्या निम्तिन सक्छ । यतिमात्रै होइन मदिरा सेवन गर्दा क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मुटु तथा रक्तनलिसम्बन्धि रोग, मानसिक रोग, कलेजोसम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ । त्यसैले मदिरा सेवन…
काठमाडौ — आफ्नो पित्तले भुँडीबाट हैरान भएका व्यक्तिहरू त्यो सुहाउँदिला आकारमा आओस् भनेर अनेक उपाय अपनाउने गर्छन् । धेरैजसोको एउटै फर्मुला हुन्छ– भात नखाने वा अरू खाना पनि निकै कम खाने । नयाँ अनुसन्धानको दाबीअनुसार, स्लिम देखिने चक्करमा खाना छोड्दा उल्टो प्रतिफल आउन सक्छ । भुँडी घट्ने होइन, झन् बढ्न सक्छ । यो अनुसन्धान जर्नल अफ न्युट्रिसन बायोकेमिस्ट्रीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ । एक छाक नखाएर अर्को छाकमा त्यसको भर्पाई गर्न खोज्नुभन्दा दिनभर अलिअलि खाने गर्दा चाहिँ भुँडी घटाउन मदत मिल्छ । अध्ययन अनुसार, क्यालोरी घटाउन भोजन छोड्ने कामले शरीरलाई…
खाली पेटमा खादा विष समान हुने यस्ता खानेकुरा
काठमाडौं– मानिसहरुको दैनिकी निकै परिवर्तन भएको छ । फुर्सदमा खाने समय समेत हुँदैन मानिसहरुलाई । समय भन्दा पनि कुन समयमा के खाने भन्ने विषय समेत पत्तो पाउँदैनन् मानिसहरु । केही खानेकुरा खाली पेटमा खाँदा विष समान हुन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई निकै ठूलो हानी पुर्‍याउँछ । के के कुरा खाली पेटमा खानु हुँदैन यस विषयमा आज हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौं- सोडाः सोडामा कार्बोनेट एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ। यदि खाली पेटमा सोडा खाने हो भने तमतम लाग्ने तथा असहज महसुस हुन सक्छ। गोलभेँडाः गोभेडामा एसिडको मात्रा हुन्छ। खाली पेटमा अघुलनशील…
काठमाडौँ । महिला र पुरुषमा यौन रोग देखिनु सामान्य कुरा हो । तर अधिकांश यौन रोग पुरुषको तुलनामा बढी महिलामा हुन्छ । यौन रोग असुरक्षित यौन सम्पर्क , स्तनपानमा र सरसफाईमा ध्यान नदिदाँ लाग्दछ । आज हामी तपाईलाई यही महिलाहरुमा हुने यौन रोगको बारेमा कुरा गदै छौँ । महिलाहरुमा यौन रोगको लक्षणहरु -पिसाव फेर्दा पीडा हुनु -तल्लो पेट दुख्नु -भेजिना डिस्चार्ज -यौन सम्पर्कको बेला हुने पीडा -महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्नु महिलाहरुमा कस्ता किसिमका यौन रोगहरु देखा पर्दछ ? गोनोरिया (धातु रोग) यो महिलाहरुमा लाग्ने यौन रोगमध्ये एक हो ।…
अध्ययनले भन्छ, धेरै तातो चिया पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन्छ
चिया पिउने कुरा समान्य हो । साथीभाइसँग भेट हुँदा होस् या विहान उठ्नासाथ नै किन नहोस् चिया पिउने कुरालाई दैनिकी नै भन्दा हुन्छ । हामीले दिनहुँ पिउने चिया हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुराबारे हामी अनबिज्ञ हुन्छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको क्यान्सरसँग सम्बन्धित इन्टरनेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरले गरेको अनुसन्धानले धेरै तातो चिया पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै खतरापूर्ण हुने देखाएको छ । अनुसन्धानमा तातो चिया पिउदा पिउने व्यक्तिको खाना नलिमा क्षति पुग्ने बताइएको छ । यो अनुसन्धान ति देशहरुमा गरिएको थियो जँहाका मानिसहरु तातो चिया बढी पिउने गर्दछन्…